Pfungwa dzeMunamato Yekugadzirira Bvunzo | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Pfungwa dzeMunamato Yekugadzirira Bvunzo
Muparidzi 9:11: "Ndakadzoka, ndikaona pasi pezuva, kuti nhangemutange harisi kumhanyisa, kana kurwa kune vane simba, kunyange chingwa kunevakachenjera, uye hupfumi kune varume vekunzwisisa, kana kufarira vanhu. yehunyanzvi; asi nguva nezviitiko zvinouya kune vese.
Ndinoyeuka mazuva angu emudzidzi, ndakave nekukurukurirana nevamwe vandaidzidza navo uye chimwe chinhu chakarova pfungwa dzangu panguva yekutaura kwedu. Mumwe wevadzidzi vane hunyanzvi mukirasi yangu muKristu uyo ​​wese munhu airemekedza kuve akazvipira kwazvo. Aive achiudza mukadzi mukirasi yangu kuti haanamati asati agara chero bvunzo.
Ipo, ndiye mumwe weakanakisa vadzidzi mudhipatimendi rese. Panguva yekukurukurirana, mumwe wacho akapikisa kuti zvakakosha kunamata usati wanyora bvunzo, akatendeukira kwandiri ndokubvunza kana ini ndinonamatawo ndisati ndanyora bvunzo. Ndakamuudza point-blank that of cause ndinonamata ndisati ndanyora bvunzo. Ipapo akataura chirevo chinogombedzera chakarova pfungwa dzangu, nepo zvirevo zvake zvingaite senge kudada, akataura mamwe mapoinzi akakodzera aive echokwadi. Vakati Mwari vakatipa nyasha dzekuverenga nekunzwisisa, uye kazhinji hatidi kuinamatira, ichi chipo chechisikirwo kuvanhu.
Nekudaro, mashandisiro atinoita uropi hwedu kunoenderana nesu, Mwari haana mhosva nazvo. Akaenderera mberi achiti maKhristu mazhinji anotadza bvunzon nekuti vanonamata zvakanyanyisa uye zvakadaro vanoramba kuverenga muchikamu chimwe chete icho chavanamata. Zvino, mune ino chinyorwa, hatisi kukurudzira vadzidzi kuti vanamate vasingaverengi. Rangarira kuti rugwaro runoti kudzidza kudzidza kuratidza kuti watenderwa.
Zvichakadaro, zvakakoshawo kuti unamate usati wanyora uye mushure mekunyora bvunzo kuitira Mwari ngoni uye kufarira kuperekedza script yedu, kana iko kufarirwa naMwari kunotevera script yako, iko kunowana kufarirwa pamberi pemuongorori. Sezvamakanyatsogadzirira nekufunda nesimba, zvakakoshawo kuti iwe unamate zvakanyanya. Iyo gimmick yakapusa ndeyekunamata sekunge iwe hauna kumboverenga nekuverenga sekunge hauna kunyengetera.
Naizvozvo, mushure mekuverenga uye iwe unofanirwa kugadzirisa zvinhu munzvimbo yemweya uye uchafanira kutaura kuna Mwari. Isu takanyora runyorwa rweminamato yekunamata kuti titaure kugadzirira bvunzo. Ndinokukurudzira kuti uite minamato iyi nokutenda, uchiziva kuti haisi nesimba, kana nesimba, asi nemweya waIshe. Iwe unozobudirira mumabvunzo ako muZita raJesu Kristu.
• Ishe, ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndidzidze, ndinokutendai nemukana wekusimbisa zvinhu, Ishe vakuze muzita raJesu.
• Ini ndinonamata kuti pandinoramba ndichiverenga kuti muchapa nyasha dzekubata zvinhu nenzira kwayo, uye nemuzita raJesu.
• Ini ndinokumbira mweya wekunzwisisa, Ruzivo, neUchenjeri, zvinozoita kuti ndikwanise kunyora nenzira kwayo muongororo, ndinonamata kuti muzozvisunungura pandiri muzita raJesu.
• Baba Ishe, pandinogadzirira bvunzo dzangu ndinokumbira kuti muve netsitsi neni muzita raJesu.
• Bhaibheri rinoti kana mumwe wenyu akashayiwa njere ngaabvunze kuna Mwari zvinopa pachena. Baba vane rudo ndinokumbira kuti mundipewo huchenjeri hwesimbise muzita raJesu.
• Ini ndinouya kuzopesana nemweya yega yega yekutya inogona kuda kutonga moyo wangu, ndinoiparadza neropa raKristu.
• Bhaibheri rinoti usatya kuti ndiri Mwari wako, usavhunduke nekuti ndinewe, ndinokumbira kushinga pamweya kuti nditaure zvakakwana muimba yekuongorora.
• Mambo Wakarurama, ndimi musiki wezvinhu zvese kuburikidza neyakavhenekera nehungwaru, ndinokumbira kuti mwenje yenyu ivhenekere rima rekunzwisisa kwangu, ndinokumbira kuti mweya wako mutsvene munyaradzi ave neni uye apukuse chimiro chega kutya kungada kusimuka.
• Baba vane rudo, ndimi. mabviro ezvese zviripo, ndinokumbira kuti muchaise pamusoro penyasha uye kugona kududzira mibvunzo yese yandichauya nayo muhoro yebvunzo.
• Ini ndinonamatira simba remweya wako rinoyera rinoturikira zvakashata zvakavharirwa mushoko raMwari, ndinokumbira kuti zvindibatsire kududzira mibvunzo yese yandichabvunzwa muzita raJesu.
• Ishe Mwari, ini ndinokumbira mweya waMwari uchaunza zvese zvandakaverenga kuyeuka, kuti handizokanganwe zvese zvandakanga ndichiverenga.
• Ini ndinotsvaga nyasha dzenyu dzinogara dzichiunza uye nekuyeuchidzai zvinhu zvese zvandakaverenga.
• Ishe wekudenga, ndinouya kuzopesana nesimba rese neropa raJesu rinokosha. Simba rega rega rinoda kuvhiringidza kushinga kwangu, ndinovaparadza nesimba riri muzita raJesu.
• Ini ndinotsvaga simba rinozopa iyo auction kuti uzive pfungwa dzemuongorori. Simba rinozoita kuti ndinyatsoziva kuti muongorori anoda kuti mibvunzo ipindurwe sei, Ishe ndinokumbira kuti mupe kwandiri.
• Ishe Jesu, ndinouya kuzopesana nesimba rose rekutadza neropa regwayana. Jesu haambokundikani, zvave kuita kuti ndikundikane, iota yega yega yekukundikana yakarongwa nemuvengi, ini ndinoiparadza muzita raJesu.
• Baba Ishe, ndinonamata kuti mundipewo inyasha kuti ndive chaizvo mune zvese zvirevo zvangu, ndinotsvaga nyasha kuti nditaure zvakajeka uye nerunako, Ishe kusunungurwa pandiri muzita rakasimba raJesu.
• Ini ndinokumbira mweya wekunaka, chimwe chezvakadai wamakapa Dhanyeri chakamupatsanura kubva kune vamwe, iwo mweya wekuratidzira unondigadzika parutivi kuti ndibudirire, ndinonamata kuti mundisunungure muzita raJesu.
• Ini ndinouya kuzopesana nehurongwa hwese nedanho radhiyabhori kuparadza zuva iro kana kuita nyonganiso nesimba riri muzita raJesu.
Ndatenda mambo akarumbidzwa neminamato yakapindurwa, ndinokutendai nekubudirira kunyorwa bvunzo, ndinokutendai kunge maive makaisa zuva iro pamusoro pehunyanzvi, ndinokutendai imi Mambo wekudenga, zita renyu rinesimba ngarikwidziridzwe.
Previous nyaya20 minamato Pfungwa dzekununurwa Kubva muupombwe
inoteveraMunamato weDziviriro Pakaipa
Nguva Yekurara Yevana